Ogaden News Agency (ONA) – Q4raad ee Maskax Maydhka: Meles Zenawi Wuxuu Saadaaliyay – Noora Afgaab
Q4raad ee Maskax Maydhka: Meles Zenawi Wuxuu Saadaaliyay – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ August 27, 2015
Waxaa lasoo gaadhay watigii aan soo gabagabayn lahaa taxanaha maqaalkan, maadaama ay socdaan dhacdooyin badan oo Itobiya iyo Ogadenyaba wax kabadali doona oo u baahan in diirada la saaro. Waxaa ka socday todobaankan Itobiya shirar ay si gooni ah u yeelanayeen ururada ku bahoobay EPRDF, halkaasoo ay kasoo dhex bixi doonaan xukuumadda la dhisi doono iyo awood qaybsiga EPRDF. Gadaal ayaan kaga hadli doonaa mawduucan.
Waxaan kusoo sheegnay Q1aad ee taxanahan in sababta maskaxda looga maydhayo shacabka ay tahay si loo hanto oo loogu jaheeyo meesha lala doonayo. Barnaamijkan ka socday Ogadenya waxaa bilaabay KT Meles Zenawi oo dagaalkii Cobole ka dib caalamka maqashiiyay inuu ku qaadi doono ONLF dagaal dhan walba ah, muddo koobanna uu kaga sifayn doono dalka Ogadenya. Maalgalin arintaa ku saabsanna wuxuu ka helay meela kala duwan oo shirkadaha shidaalka ay ka mid ahaayeen. Hadaba sababta shacabka loo laynayay oo dhaqaalaha farabadan loogu bixiyay wuxuu ahaa in ONLF lagaga sifeeyo Ogadenya, isla markaana loosoo afjari lahaa dhaq-dhaqaaqa jaaliyadaha caalamka ku firirsan ee halganka ka socda Ogadenya laga taageero. Maxaa ka hirgalay arintaa? Jawaabta ay bixiyaan nimanka loo xilsaaray fulinta barnaamijkan oo kala ah Cabdi iley iyo Abraha Wolde marka la weydiiyo su’aashaa waxay noqotay jawaabtooda mid aan hadda ka gadmaynin shacabka Jigjiga iyo dawladda fadhida Adis Ababa toona.
R/wasaarihii hore ee dhintay Meles Zanawi wuxuu ahaa cadaw caqli badan, waxyna Carabta ku maahmaahaan cadaw caaqil ah ayaa dhaama saaxiib jaahil ah ( عدو عاقل خير من صديق جاهل ). Saaxiibka jaahilka ah naftiisa iyo naf kale toona waxba tari mahayo. KT Meles Zenawi ayuu ahaa ninka soo helay Cabdi iley oo waliba ku balamiyay saraakiisha ciidanka ee Tigreega ah ee joogay Ogadenya inay faraha uga qaadaan Cabdi iley laynta shacabka.
Wuxuu ii sheegay nin aan saaxiiba nahay oo Tigree ah oo kasoo horjeeda xasuuqa loo gaystay shacabka Ogadenya, inay saraakiil Tigree ah u tageen Meles oy yidhaahdeen Cabdi iley sabab la’aan ayuu dadka ku dilayaa, waxayna ka dalbadeen in talaabo laga qaado. Wuxuu ugu jawaabay buu yidhi; “Haduu dalka idiin xasilinayo oo gacantiisa uu ku laynayo ilma adeeradii maxaad ka rabtaan idinka”. Wuxuu raaciyay; Meles Zanawi waxaa hubaal ah inuu ku khasaaray Cabdi iley, mana filayo inuu Meles Zanawi doonayay un in shacabka Ogadenya natiija la’aan la’iska laayo. Wuxuu kaloo yidhi; intuusan dhiman ayuu arkay xaaladda siday ku socoto, oo wuxuu ahaa Meles dadka saadasha dheer ku fiican. Wuxuu ka fahmay warbixinada ay usoo gudbinayaan Cabdi Iley iyo Saraakiisha Tigreega u fadhiya Harar, inay yihiin koox u arka maslaxadooda inay ku jirto dagaalka ka socda Ogadenya oo aanay ogolayn in lasoo afjaro dagaalkaa, isla markaana ugu sawiraya dawladda laynta shacabka inay tahay la dagaalanka ONLF. Sidaa dared ayuu intuusan dhimanin bilaabay inuu wadahadal la furo ONLF, waanan hubaa buu yidhi, haduu noolyahay Meles inay xaaladda sidan ka duwanaan lahayd. Marxaladda hadday aan mareyno ayuu ku soo gabagabeeyay, arinta Ogadenya waxay u dhacday siduu filayay Meles Zenawi. Nasiibdarro ninkii xakamayn lahaa kooxdan mafiyada ah laguma hayo Itobiya maanta.
Hadaan intaa ku dhaafo hadaladii aan kasoo guuriyay niinkan aan saaxiibaha nahay ee Tigreega ah; dadka la socda xaaladda waxay aaminsan yihiin in Cabdi iley iyo kooxda la socota ay dhibka ugu badan gaadhsiiyeen dadka shacabka ah, oo ONLF ay aad uga badbaaday wuxuu la maaganaa Meles Zenawi markuu dhisayay ciidanka Liyu Booliska. Markay sidaa leeyihiina waxay xusaan arimo ay ka mid yihiin; dagaalada maalinlaha ah ee ka socda Ogadenya, mooraalka maleesiyadii Liyuu Booliska oo aad u hooseeya oo hadda ay adagtahay inay dagaal ku qaadaan ONLF, iyo Cabdi iley oo qofkastoo u yimid oo damacsanaa inuu la dagaalamo ONLF u arkay inuu yahay nin booska ka qaadi doona oo ka caydhiiyay dalka. Waxay intaa raacinayaan dadkaan sheekaysano, inay wiilasha ONLF xaq ku taagan yihiin waxaad ka garan wixii lala maaganaa siduu Ilaahay u kala daadiyay. Aaway Ibraahim dheere iyo kooxdiisi, aaway Salaaxudiin iyo durbaankii loo tumay, aaway qurbajoogtii ooda soo jabisay, aaway saraakiishii uu ka midka ahaa Doolaal Adan Dhagoole, aaway .. aaway?.
Waxaa ka hadhay barnaamijkii la dajiyay 2008dii Jeel Ogaden oo hadda ay ku wada jiraan taageerayaashii hore ee Cabdi iley iyo kuwii lagu soo eedeeyay inay yihiin ONLF iyo qaar badan oo maamulada degmooyinka ay siyaaba kala duwan usoo wanjaleen. Ilaahay haka wada badbaadiyo.